FAQ - Chisa Group Limited
घर > हाम्रोबारे>FAQ
सिलिकन सेक्स खेलौना कसरी सफा गर्ने?
आफ्नो खेलौनालाई जीवाणुरोधी साबुन र तातो पानीले धुनुहोस् वा दुईदेखि तीन मिनेटसम्म उमालेर राख्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सिलिकन भित्र कुनै मोटर बेरिएको छैन; अन्यथा, तपाईंको सेक्स खेलौना बर्बाद हुनेछ। यसलाई हावा सुकाउन दिनुहोस्।
रबर सेक्स टोय कसरी सफा गर्ने?
आफ्नो खेलौनालाई जीवाणुरोधी साबुन र तातो पानीले धुनुहोस्।
प्लास्टिक सेक्स खेलौना कसरी सफा गर्ने?
आफ्नो खेलौनालाई जीवाणुरोधी साबुन र तातो पानीले धुनुहोस् वा अल्कोहलले कुल्ला गर्नुहोस् (पछि पानीले कुल्ला गर्नुहोस्)।
लेटेक्स सेक्स खेलौना कसरी सफा गर्ने?
जेली सेक्स खेलौना कसरी सफा गर्ने
साइबरस्किन सेक्स खेलौना कसरी सफा गर्ने?
तपाईं आफ्नो खेलौना साबुन र तातो पानी संग धुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि, खेलौनालाई हावामा सुकाउनुहोस् र त्यसपछि यसको विशेष बनावट कायम राख्न मद्दतको लागि कर्नस्टार्च पाउडर लगाउनुहोस्। अर्को पटक तपाइँ आफ्नो खेलौना खेल्न बाहिर निकाल्दा तपाइँ पाउडर धुन सक्नुहुन्छ
सिलिकन सेक्स खेलौना के हो?
यी खेलौनाहरू धेरै जीवन्त महसुस गर्छन् किनभने सामग्री नरम, लचिलो र चिल्लो छ। सिलिकन शरीरको तापक्रम कायम राख्न पनि राम्रो छ, त्यसैले यसले तपाईंको यौन कल्पनामा यथार्थवादको चिंगारी थप्छ। सिलिकन सेक्स खेलौनाहरू पनि हाइपोएलर्जेनिक हुन्छन् र तिनीहरू रबर जस्तो गन्ध गर्दैनन्। सामाग्री सफा गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ र धेरै टिकाउ छ; यदि तपाइँ प्रत्येक प्रयोग पछि तपाइँका खेलौनाहरू धुनुभयो भने, तिनीहरू लामो समयसम्म टिक्न सक्छन्। यद्यपि तिनीहरू सामान्यतया औसत खेलको तुलनामा अलि बढी खर्च गर्छन्, सिलिकन सेक्स खेलौनाहरूको आयु लामो हुन्छ र सुरक्षित गर्न सजिलो हुन्छ।
रबर सेक्स खेलौना के हो?
यो सामग्री अझै नरम र अपेक्षाकृत लचिलो छ, तर सिलिकन वा जेली खेलौना जत्तिकै होइन। यी खेलौनाहरू सस्तो र बहुमुखी छन्, तर लेटेक्स रबर छिद्रपूर्ण र सफा गर्न गाह्रो छ। सम्भव भएसम्म, रबरका खेलौनाहरूसँग खेल्दा कन्डम प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग लेटेक्स एलर्जी छ भने, यो उत्तम हुन्छ यदि तपाइँ रबरका खेलौनाहरू बेवास्ता गर्नुहुन्छ।
प्लास्टिक सेक्स खेलौना के हो?
यी खेलौनाहरू धेरै टिकाउ छन् र यदि तपाइँ तिनीहरूलाई धेरै पटक छोड्नुहुन्न भने, तिनीहरू लामो समय सम्म रहनेछन्। प्लास्टिक चिल्लो र ठोस छ, त्यसैले कम्पनहरूले सामग्रीको माध्यमबाट यात्रा गर्दा कुनै शक्ति गुमाउँदैन। यसले प्लास्टिकको यौन खेलौनाहरू प्रवेश उत्तेजनाको लागि उत्तम बनाउँछ र कडा कम्पनहरू मन पराउनेहरूका लागि सिफारिस गरिन्छ।
लेटेक्स सेक्स खेलौना के हो?
नरम तर दृढ, लेटेक्स एक धेरै लोकप्रिय सेक्स खेलौना सामग्री हो। यी खेलौनाहरू अपेक्षाकृत सस्तो हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू उच्च गुणस्तरको यौन खेलौनाहरूमा लगानी गर्नु अघि प्रयोग गर्न चाहने मानिसहरूका लागि सिफारिस गरिन्छ। लेटेक्स शोषक भएकोले, ब्याक्टेरिया सजिलै खेलौनाको सतहमा विकास गर्न सक्छ। आफ्नो खेलौनासँग खेल्दा कन्डम प्रयोग गर्नुहोस् (यदि सम्भव भएमा) र प्रत्येक प्रयोग पछि यसलाई सावधानीपूर्वक सफा गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई लेटेक्स रबरसँग एलर्जी छ भने, लेटेक्स सेक्स खेलौनाहरूबाट बच्नुहोस्।
जेली सेक्स खेलौना के हो?
यी धेरै लोकप्रिय सेक्स खेलौनाहरू हुन् किनभने जेली सस्तो छ र सजिलैसँग तपाईंको आकार र आकार अनुरूप हुन सक्छ। यद्यपि, जेली एक नरम सामग्री हो र यसले कम्पनहरू अवशोषित गर्न सक्छ, तपाईंको खेलौनाको पल्सेटिंग भावनालाई नरम बनाउँछ। जेली पनि छिद्रपूर्ण र सफा गर्न गाह्रो हुन्छ; गुदा र योनि प्रवेशको लागि एउटै जेली खेलौना प्रयोग नगर्नुहोस्। सम्भव भएसम्म, आफ्नो जेली खेलौनाहरूसँग खेल्दा कन्डम प्रयोग गर्नुहोस्
साइबरस्किन सेक्स खेलौना के हो?
साइबरस्किन सेक्स खेलौनाहरू वास्तविक छालाको अनुभूति जत्तिकै नजिक छ जुन खेलौना पाउन सकिन्छ। सिलिकन र प्लास्टिकको संयोजन, साइबरस्किन सेक्स खेलौनाले तपाईंलाई अलि बढी खर्च गर्नेछ। तर लगानी सामान्यतया यसको लायक छ किनभने यी खेलौनाहरू सहज र अद्भुत यथार्थवादी महसुस गर्छन्। यद्यपि, यी खेलौनाहरू लगनशील सफाई चाहिन्छ।
हामीले अर्डर गरेपछि के म तपाइँका चित्रहरू लिन सक्छु?
हो पक्कै पनि हामी तस्बिरहरू प्रस्ताव गर्नेछौं। हामी तपाइँको तस्विर फाइल वेबसाइट मा राख्नेछौं, त्यसपछि हामी तपाइँलाई डाउनलोड गर्न को लागी प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड पठाउनेछौं।
के तपाइँको सेक्स खेलौना Phthalate मुक्त छ?
हो, हामी हाम्रा सबै उत्पादनहरू phthalate-रहित हुने वाचा गर्छौं।
मैले पहिले गरेको थिइनँ भनेर कसरी आयात गर्ने?
सानो अर्डरको लागि, तपाईले हामीसँग मात्र अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, हामी स्टक जाँच गर्नेछौं र DHL (इत्यादि) द्वारा सामानहरू पठाउनेछौं, यो घरको ढोका हो, त्यसैले तपाईले यस बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। जहाजबाट ठूलो अर्डरको लागि, कृपया जेसन (डिस्प्याच विभाग) लाई सम्पर्क गर्नुहोस् jason@chisa-novelties.com, उसले तपाईंलाई कसरी विस्तृत रूपमा प्रक्रिया गर्ने भनेर सिकाउनेछ।